अष्ट्रेलियालाई साखको चिन्ता, भारतलाई नयाँ इतिहास ! | Hamro Khelkud
अष्ट्रेलियालाई साखको चिन्ता, भारतलाई नयाँ इतिहास !
एजेन्सी – अष्ट्रेलिया र भारतबीचको चौथो तथा निर्णायक टेस्ट बिहिबारदेखि सिड्नीमा सुरु हुँदै छ । खेल नेपाली समय अनुसार विहान ५ : १५ बाट चल्ने छ । चार टेस्टको श्रृंखलामा भारत २–१ को अग्रतामा छ ।
पहिलो टेस्टमा भारत ३१ रनले विजयी हुँदा दोस्रोमा १ सय ४६ रनले पराजित भयो । तेस्रो टेस्टमा भारत १ सय ३७ रनले विजयी भएपछि पहिलो पटक अष्ट्रेलियन भूमिमा टेस्ट सिरीज जित्ने भारतको आसा पलाएको हो । भारतले चौथो टेस्टमा जित वा ड्र गराए पहिलो पटक अष्ट्रेलियन भूमिमा टेस्ट सिरीज जित्ने छ । पराजित भए यस पटक पनि भारतको सपना अधुरै हुने छ । जुन इतिहास रच्न कप्तान विराट कोहली सहित अन्य खेलाडी आतुर देखिन्छन् ।
अहिले सम्म भारतसँग घरेलु मैदानमा टेस्ट सिरीज नगुमाएको अष्ट्रेलियाले आफ्नो ऐतिहासिक साख जोगाउन हर परयास गर्ने छ । साख जोगाउन अष्ट्रेलियाले चौथो टेस्टमा जित निकाल्नै पर्छ । जितको रणनीति सहित कप्तान टिम पेन र खेलाडी मैदान उत्रने छन् । दुवै टोली सन् २०१९ मा सुखद सुरुवात चाहान्छन् । सन् २०१८ मा चार दशक यताकै खराव प्रर्दशन गरेको अस्ट्रेलिया उक्त प्रर्दशनलाई भुलेर सन् २०१९ मा घरेलु मैदानबाट सुखद सुरुवात गर्न चाहान्छ ।
इतिहासमा अस्ट्रेलियन भूमिमा भारतको टेस्ट सिरीज:
सन् १९४७–४८ मा भारतले पहिलो पटक अस्ट्रेलिया भूमिमा टेस्ट सिरीज खेलको थियो । अस्ट्रेलिया भूमिमा १९६७–६८, १९७७–७८, १९९१–९२, १९९९–२००, २००७–०८ तथा २०१४–१५ को दौरानमा टेस्ट सिरीज भारतले हारेको थियो । १९८०–८१, १९८५–८६ र २००३–०४ मा भने सिरीज बराबरीमा सकिएको थियो ।
अस्ट्रेलिया यस पटक किन कमजोर ?
घरेलु र विदेश दुवै मैदानमा सधै हावी हुने अस्ट्रेलिया यस पटक कमजोर देखिएको छ । बल टेम्पिरिङ काण्डका कारण पुर्व कप्तान स्टिभ स्मिथ र डेविड वार्नरलाई १ वर्षे प्रतिबन्ध लागेपछि अस्ट्रेलिया ४० वर्षकै कमजोर हुन पुगेको हो । स्मिथ र वार्नर अस्ट्रेलियाका प्रमुख ब्याट्सम्यान थिए । यी दुई खेलाडीको प्रतिबन्ध हट्न अझै तीन महिना बाँकी छ ।
भारतीय टिम : विराट कोहली (कप्तान), मयंकअग्रवाल, हनुमा विहारी, लोकेश राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पन्त, रविन्द्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव र रविचन्द्रन अश्विन।
अस्ट्रेलिया टिम :
टिम पेन(कप्तान), मार्कस ह्यारिस, आरोन फिन्च, उस्मान ख्वाजा, ट्रविस हेड, शन मार्श, मिचेल मार्श, नाथन लायन, मिचेल स्टार्क, प्याट कमिन्स, जोश हेजलवुड, मार्नस लाबुशेन, पिटर हृयान्डस्कोम्ब र पिटर सिडल।